Sidee. Edu backlinks saameyn ku yeelan kartaa boggaaga SEO ah?
Dib-u-celinta Edu waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu qiimaha badnaa marka ay ka yimaadaan aamino la isku hallayn karo oo magac leh. Inta badan waxaa isticmaala jaamacadaha, jaamacadaha, dugsiyada sare, iyo hay'adaha kale ee waxbarashada. Marka ay qiimeeyaan dadka isticmaala, Google waxay ku qanacsan yihiin iyaga oo u sareysa SERP.
Waxay qaadataa wakhti badan iyo dadaal si ay u hellaan xiriirka laga helayo boggaga internetka. Si kastaba ha ahaatee, faa'idadu waxay tahay inaadan si cad u noqonin khibrad khaas ah oo waxbarasho gaar ah si aad u hesho dib u qabasho si aad u hesho goobta.
Haddii aad ku dhibtoonayso inaad tayada hesho. Edu backlinks si aad goobta, post this noqon doonaa qiimo kuu ah sida aan halkan ku soo ururay dhammaan farsamooyinka dhismaha ganacsiga ugu.
faa'iidooyinka. Edu backlinks
Google wuxuu ku qanacsan yahay dhammaan edu. domains iyo ka dibna waxay soo jiidan doonaan boggaaga si aad u badan oo kala duwan haddii aad hesho xiriirada dibadda ee ka yimid domainskan;
Dhamaan shabakadaha internetka waxbarasho waxay yihiin kuwo tayo sarre leh oo qiimo leh u leh isticmaalayaasha;
Xiriirintaada. edu domain, waxaad heli doontaa badan oo ah taraafikada la bartilmaameedsanayo kuwaas oo noqon doona mid sahlan in lagu beddelo;
Ka faa'iideysiga bogga qiimaha iyo runta.
Sida loo dhiso tayada. Edu backlinks?
Deeq deeq waxbarasho
Inuu abuuro xiriir wanaagsan oo lala yeesho jaamacadaha iyo dugsiyada sare, waxaad ardayga siin kartaa deeqo iyo deeqo waxbarasho.
Waxaad bilaabi kartaa sameynta raadinta websaydhka hay'adaha waxbarashada Google ama dariiqyada kale ee maxaliga ah kuwaas oo ku siin kara macluumaadka ku habboon su'aalahaaga. Hubi, hay'ad waxbarasho oo aad doorato waxay leedahay dad badan oo soo booqda ama waydii in jaamacad ama iskuul ay leedahay jaaliyad. U gee dadka mas'uulka ka ah beelahaas. Iyada oo ku saleysan suuq-geyntaada ama badeecooyinka aad tafaariiqda, waxaad bixin kartaa. ilaha edu ee leh faa'iidooyin kala duwan oo dib loogu soo celiyo. Tusaale ahaan, haddii aad qalabka isboortiga tafaariiqda, waxaad siin kartaa deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda ku fiican ciyaaraha. Haddii aad awoodi kartid inaad ka hesho barta gacan-qabashada. ilaha shabakadda edu oo ah ugu yaraan qadar u ah suuqa xorta ah, ka dibna waxaad ku dartaa qiime aad u qadarineyso astaanta dhabarkaaga.
Ku siin qiimo dhiman ardayda
Haddii aad tafaariiq wax soo saartid oo waxtar u leh ardayda baahidooda maalin walba, waxaad isku dayi kartaa inaad dib u hesho dib u soo celinta qiimo dhimis. Ku siiyaan ardayda leh talooyin iyo hadiyado gaar ah. Alaabtaadu waxay noqon kartaa mid taariikhi ah ama naqshado barnaamijyo ah oo ka caawin kara ardayda in ay raacaan koorsadooda. Waxaad u baahan tahay inaad weydiiso shahaadada jaamacadda si aad ugu daabacdo dalabkaaga bogga internetka ee hay'adda.
Abuuri maaddo xiisaynaysa ardayda
Ma heli doontid dib u eegis tayo leh, gaar ahaan. goobaha edu, haddii website-kaagu uu leeyahay qiimo kasta oo akhristayaasha. Qofna ma doonayo in uu akhriyo waxyaabaha adag ee kufilan.
Inta badan xarumaha waxbarashadu waxay sii wadaan boogaha ardayda. Waad weydiisan kartaa inaad daabacatid maktabadaha kugu habboon iyo cilmi baaris ku salaysan boggan ama soo dhajinta jawaabo macquul ah oo ku saabsan su'aalaha ardayga Source .